के हो चट्याङ र यसबाट कसरि बच्ने ? - ज्ञानविज्ञान
नेपालमा वर्षेनी झण्डै डेढ सय भन्दा बढी मानिसले चट्याङका कारण ज्यान गुमाउँछन्। विज्ञहरुका अनुसार चट्याङको जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै चौँथो/पाचौं नम्बरमा पर्छ। छिमेकी देश भारतको बिहारमा गत वर्ष चट्याङ लागेर एकैपटक १ सय १७ जनाले ज्यान गुमाए। बंगलादेशमा गत वर्ष नै ५८ जनाको एकैपटक मृत्यु भयो। जोखिम नेपालमा पनि छ तर आवश्यक सावधानी भने अपनाइएको पाइँदैन।
बादल र पृथ्वीको बीच वा बादल–बादलकै बीच बग्ने विद्युतीय करेन्ट नै चट्याङ हो। यो एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो।
चट्याङ लाग्नसाथ मृत्यु हुने घटना धेरै सुनिन्छ । चट्याङबाट घाइते भएकालाई तुरुन्त चिकित्सककहाँ पुर्‍याउनुपर्छ । चिकित्सककहाँ पुर्‍याउनुअघि प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ । धेरैजसो अवस्थामा टाउकोबाट करेन्ट प्रवेश गरेर खुट्टाबाट निस्कने हुँदा उनीहरुको टाउको र खुट्टा जलेको हुन्छ ।
उनीहरुको खुट्टा भाँच्चिएको हुनसक्छ । सुन्ने तथा हेर्ने शक्ति पनि कमजोर भएको हुनसक्छ । चट्याङ प्रभावित व्यक्तिको मुटु, मृगौंलामा असर पर्न सक्छ । चट्याङ प्रभावित व्यक्तिको मृटुको स्थितीलाई निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ |
यसरी अपनाउने सावधानी
चट्याङ लागेर उपचार खोज्नुभन्दा यस्ता प्रकोपबाट बच्ने उपाय खोज्नु राम्रो हो । खासगरी दर्के झरी परिरहेको एवं विजुली चम्किएको अवस्थामा सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
– अग्ला डाँडा एवं खुला स्थानमा बस्नु हुँदैन ।
– फलामको पोल, विद्युतिय उपकरण आदिको सम्पर्कमा रहनु हुँदैन ।
– रुखमुनी उभिनु हुँदैन ।
– विद्युतिय उपकरण प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
– पानीमा पौडिनु हुँदैन ।
– छाता खोल्नु हुँदैन ।
– चट्याङ परेको बेला घरभित्र बस्नु बढी सुरक्षित हुन्छ । संभव भएसम्म पक्की भवनमा आश्रय लिने ।
– घरबाहिर हो भने गाडीभित्र झ्यालढोका बन्द गरेर बस्नु राम्रो हो ।
– यदि खुला स्थान छ भने घुडाले भूँइमा टेकेर हात टाउको माथि राखेर निहुरिएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ ।
चट्याङ परिसकेपछि ढुंगा वा बन्चरोजस्तो ठोस बस्तु भेटिन्छ भनिन्छ। यो के हो ?
मानिसहरुले कहिले ढुंगा भेटेको कहिले बन्चरो भेटेको किस्साहरु सुनिने गर्छन्। तर यो सत्य होइन। चट्याङ बग्दै गर्दा त्यसबाट निस्कने तापक्रम सुर्यको सतहको भन्दा बढी हुन्छ। त्यो करेन्ट जुन वस्तुबाट प्रवाह हुन्छ त्यो तत्काल पग्लिन्छ र सेलाउँदा त्यसले एउटा ठोस आकार लिन्छ। मानिसले त्यसैलाई बन्चरो, ढुंगा भन्ने गरेका हुन्। चट्याङसँगै केही पनि ठोस बस्तु खस्दैन |
Don't Miss it हेर्दा जति आकर्षक उति नै धेरै फाइदा दिने फल, अंगु्र
Up Next कोलेस्टेरोल के हो ? समाधानको उपाय के हो ?